Exynos 980: Samsung processor na ntinye 5G | Gam akporosis
Exynos 980: Samsung processor mbụ ya na 5G jikọtara ọnụ
Edere Ferreno | | Noticias, Samsung
Otu ọnwa gara aga Samsung gosipụtara usoro nhazi ọhụụ ọhụrụ ya, nke dị na Galaxy Note 10, ndị Exynos 9825. Firmlọ ọrụ Korea na-emezi usoro ya dị iche iche ugbu a, nwere ihe atụ akpọrọ inwe nnukwu mkpa. Kemgbe mbinye aka anyị doo ya na nhazi mbu ya na 5G. Nke a bụ Exynos 980, nke bụrịrị gọọmentị.
Nke a dịgasị iche iche nke Samsung processors na-kwalitere n'ụzọ dị otú a site na isi mmalite. Exynos 980 bụ onye nhazi izizi nke nwere 5G, na mgbakwunye na ịbịarute na usoro nke ndozi dị mkpa dị ka onye mepụtara Korea gosipụtara na ngosipụta ya. Oge dị mkpa maka ụlọ ọrụ.
Ihe nhazi a bu mmalite nke 9820, nke dị na Galaxy S10. Exynos 980 jikọtara isi dị iche iche iji nye ike ike dị ala, yana ịbụ onye nhazi dị ike, yana ọnụnọ nke ọgụgụ isi na-apụ apụ maka ọnụnọ nke 5G. Ọ na-abịa na modem 5G wuru n'ime nhazi ahụ n'onwe ya. Ekele ya, enwere ike ịme njikọ site na Edge 2G na netwọk 5G.
Exynos 9825: Nhazi nke 10 Galaxy Note bụ ọrụ
1 Exynos 980 Nkọwapụta
2 Kedu mgbe a ga-ewepụta ya
Exynos 980 Nkọwapụta
Samsung ekenyelarị nkọwa dị mkpa banyere ihe nhazi ọhụrụ a. Ya mere, anyị nwere ike ịmaraworị ihe a na-atụ anya ya na nke a. Exynos 980 a nwere ikike ijikọ na netwọk 5G n'okpuru 6 Ghz. Ọ na-enye anyị a 2,55 Gbps ọsọ kachasị ọsọ.
Akụkụ ọzọ dị mkpa na ya bụ na ọ na-abịa na njikọ Dual E-UTRA-NR arụ ọrụ. Ihe niile gbasara ndakọrịta netwọk, nke enwere ike site na njikọta nke 4G LTE 2CC na 5G. Enweela ike na onye nhazi a ga-enwe nkwado serial maka netwọki WiFi 6. Kachasị ezu na nke a, dịka anyị nwere ike ịhụ. Samsung ekpughewo nkọwa ya, Nke bụ ihe ndị a:
CPU: 2 Cortex-A77 cores na-ekpuchi na 2,2 GHz na 6 Cortex-A55 cores na-ekpuchi na 1,8 GHz.
GPU: ARM Mali G76 MP5
NPU jikọtara (Nhazi Nhazi)
Usoro nhazi: 8nm LPP FinFET
Nchekwa: UFS 2.1, eMMC 5.1
Mọdem: 5G Sub 6, 5G LTE EN-DC, LTE Atiya 16, LTE Atiya 18
Igwefoto: 108 MP na-akwado na nhazi igwefoto otu nhazi abụọ na nkwado 20 +20 MP
Ngosipụta nguzo: 3360 × 1440 pixel WQHD +
Ndekọ vidiyo: Recdekọ na mkpebi 4K na 120 fps
Ilele nkọwa gị, o yiri ka Samsung agaghị eji ya n'ime oke ya. Yabụ ọnụnọ nke Exynos 980 a na Galaxy S na Galaxy Note ranges ma ọ bụ na ekwentị ya na - apịachi apịachi, nke ga-abụkwa ụdị dị n'etiti oke kachasị, ka ana - achịkwa. N'ihi ya, o nwere ebe ọzọ na-aga.
Kedu mgbe a ga-ewepụta ya
Samsung ekwughi ihe ọ bụla banyere igba egbe ahụ n'oge a site na Exynos 980 na ahịa. Onweghi ihe a ma ama banyere ekwentị ndị ga - abụ ụzọ izizi ha iji ya. Ọ bụ ezie na dị ka anyị kwurula n'elu, ọ dị ka ọ gaghị abụ njedebe ya dị elu nke ga-eji ya mee ihe.
A na-achọpụta ya na ọ nwere ike ịbụ ụdị dị n'etiti etiti na-eji ya. Samsung hapụrụ anyị ụnyaahụ ya na Galaxy A90 5G, nke mbụ ya na etiti ya na nkwado maka 5G. Ihe karịrị otu oge ụlọ ọrụ ahụ egosiwo mmasị ya na-achịkwa akụkụ ahịa a. Ya mere, ha nwere atụmatụ ịmalite ngwa ngwa o kwere mee ụdị dị n'etiti etiti na ha ga-enwe nkwado maka 5G. Ihe nhazi a gha enyere ya aka.
Ya mere, ọ gaghị abụ ihe ijuanya na na 2020 Samsung phones na-abata na etiti ha ma ọ bụ nke kachasị dị n'etiti na-eji Exynos 980. companylọ ọrụ ahụ na-aga bido mepụta ihe nhazi ihe n’afọ a, dika ha kwenyesiri ike. Yabụ na 2020 igwe izizi nke jiri ya kwesịrị ịbata n'ụlọ ahịa. Anyị na-atụ anya ịnụ n'ọnụ gị n'ọnwa ole na ole na-abịanụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Exynos 980: Samsung processor mbụ ya na 5G jikọtara ọnụ
Google ga - amalite ngwa ohuru "Android Auto for mobile screen"
The OnePlus 7T jere ije site na Geekbench iji chọpụta ụfọdụ nkọwa ya